Zụrụ Acetic Acid powder (459789-99-2) hplc ma98% | AASraw
/ ngwaahịa / Ndị R & D mmeghachi omume / Obeticholic Acid ntụ ntụ
Rating: SKU: 459789-99-2. Category: Ndị R & D mmeghachi omume
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke Obeticholic Acid powder (459789-99-2), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkwa mma.
Obeticholic acid ntụ ntụ ejiri mee ihe na PBC na ndị okenye ma na-ejikọta ya na ọgwụ ọzọ a na-akpọ ursodeoxycholic acid (UDCA). Primary biliary cholangitis (PBC) bụ ọrịa na-adịghị ala ala nke na-eji nwayọọ nwayọọ bibie mmiri dị n'ime imeju.
Obeticholic Acid ntụ ntụ isi agwa
aha: Obeticholic Acid ntụ ntụ
Usoro Molecular: C26H44O4
Molekụla arọ: 420.63
Obetic Acid ntụ ntụ na ejiji Antineoplastic
Aha njirimara: Obetic Acid powder (oh BET i KOE lik AS id)
Aha aha: Ocaliva
A na-eji ọgwụ a eme ihe nanị ma ọ bụ na ngwakọta ọgwụgwọ maka ọrịa ọrịa imeju (isi biliary cholangitis-PBC). Ọrịa a ji nwayọọ nwayọọ bibie bile ducts n'ime imeju. Mgbe ọgbụgba bilebaala, ihe ndị na-emerụ ahụ pụrụ iwulite na bile na-egbochi imeju. Obeticholic Acid ntụ ntụ na-arụ ọrụ site na ime ka imeju gị belata bile, na site n'inyere ka mmiri si n'ime imeju pụta. Obetic Acid ntụ ntụ nwere ike inyere aka na-arịwanye elu nke biliary cholangitis na ibelata mgbaàmà ndị dị ka ike ọgwụgwụ, akpụkpọ anụ, ihe mgbu abdominal, na anya mmiri na anya.
Kedu ihe nyocha nke Obeticholic Acid powder
Okenye ndị okenye na-emekarị maka Biliary Cirrhosis
Mkpụrụ mbụ: 5 mg okwu ọnụ otu ugboro n'ụbọchị
Nlekọta mmezi: 5 mg okwu ọnụ otu ugboro n'ụbọchị; ọ bụrụ na enwechaghị oke alkaline phosphatase (ALP) na / ma ọ bụ ngụkọta bilirubin agaghị enweta mgbe ọnwa 3 gasịrị, mekwuo usoro ọgwụgwọ na 10 mg otu ugboro n'ụbọchị
Mkpụrụ kachasị: 10 mg / ụbọchị
Na-eji: Maka ọgwụgwọ nke isi biliary cholangitis:
-Anyị na-ahụ maka ndị okenye na-enweghị ike ịnagide acid ursodeoxycholic (UDCA)
-Anyere UDCA na ndị okenye nwere ezughị oke na UDCA
Obere nfe imeju (Nwa Pugh Class A): Ọ dịghị mgbanwe a tụrụ aro.
Ọkpụkpụ imeju na oke ume (Child Pugh Class B and C):
- Ntinye mbụ: 5 mg okwu otu ugboro n'izu
- Ndozi ntuziaka: 5 mg okwu ọnụ otu ugboro n'izu; ọ bụrụ na enwechaghị oke na ALP na / ma ọ bụ ngụkọta nke bilirubin mgbe ọnwa 3 gasịrị, mụbaa dosin ahụ na 5 mg 2 ugboro n'izu (ọ dịkarịa ala 3 ụbọchị iche), wee bụrụ 10 mg 2 ugboro n'izu (ọbụlagodi ụbọchị 3 iche ) dabere na nzaghachi na nkwado
-Maximum dose: 10 mg / ụbọchị
- A ghaghị ilebara ndị ọrụ anya maka ihe omume mmeghachi omume nke imeju
- A ghaghị ịtụle ihe ize ndụ ndị nwere ike ịdaba na uru ndị ọrịa na-enwe na akụkọ ihe mere eme nke mmeghachi omume mmeju nke imeju.
Ndị ọrịa na-adịghị anabata pruritus:
-Anye ọgwụ antihistamine ma ọ bụ bile acid dị na resin
-Bịwaa usoro ọgwụgwọ na 5 mg ụbọchị ọ bụla (ọrịa ndị na-adịghị anabata ụbọchị 5 mg) ma ọ bụ 5 mg ugboro ugboro (ndị ọrịa na-adịghị etinye aka na 10 mg kwa ụbọchị)
- Kwụsị ịkwụsị ọgwụgwọ ruo izu 2, wee malitegharịa na obere dose
- Kpachara anya ka ị kwụsị ịmalite ọrịa na ndị ọrịa na ịnọgide na-adịgide adịgide pruritus.
Kedu ka Obetic Acid ntụ ntụ si arụ ọrụ
A na-eji Obeticholic Acid powder eme ihe nanị ma ọ bụ na ursodiol (Actigall, Urso) iji mee ka biliary cholangitis (PBC), ụdị ọrịa imeju nke na-ebibi ọgbụgba bile, nke na-enye ohere ka bile na-adị n'ime imeju na imebi emebi) na ndị na-enweghị ike Were ursodiol ma ọ bụ ndị mmadụ na-ejighị ursodiol na-emeso ya nke ọma. Obeticholic Acid ntụ ntụ nọ na klas nke a na-akpọ agonists nke X. Ọ na-arụ ọrụ site na mbenata mmepụta nke bile na imeju na ịbawanye mwepụ nke bile na imeju.
Tupu iwere Obeticholic Acid powder, gwa dọkịta gị maọbụ onye na-ere ọgwụ ma ọ bụrụ na ị nwere nrịanrịa, maọbụ ọ bụrụ na ị nwere ihe ọ bụla ọzọ. Ngwaahịa a nwere ike ịnwe ihe na-adịghị arụ ọrụ nke nwere ike ịkpata mmeghachi ahụ na-adịghị mma ma ọ bụ nsogbu ndị ọzọ. Gwa onye na-ere ọgwụ maka nkọwa ndị ọzọ.
Tupu ị na-eji ọgwụ a, gwa dọkịta gị ma ọ bụ onye na-ahụ maka ọgwụ na ahụike gị, karịsịa nke: mgbakọ bile duct.
Tupu ịwa ịwa ahụ, gwa dọkịta gị ma ọ bụ dọkịta banyere ihe niile ị na-eji (gụnyere ọgwụ ọgwụ, ọgwụ ndị na-edeghị ọgwụ, na ọgwụ ndị na-emepụta ọgwụ).
N'oge ime ime, a ghaghị iji ọgwụ a mee ihe nanị mgbe ọ dị mkpa. Soro dọkịta gị kwurịta ihe ize ndụ na uru.
A maghị ma ọ bụrụ na ọgwụ a abanye n'ime mmiri ara ehi. Gwa dọkịta gị na-azụ nri.
Acetic Fat Acids Powder Powder
Obetic Acid ntụ ntụ nwere mmetụta ọ bụla
Enweghi ike, ọnụ / ụfụ ihe mgbu, ma ọ bụ ngwa ngwa ma ọ bụ ngwa ngwa ịmị obi nwere ike ime. Ọ bụrụ na otu n'ime nsogbu ndị a ma ọ bụ na-akawanye njọ, gwa dọkịta gị ma ọ bụ ọkachamara n'ahịa ọgwụ.
Cheta na dọkịta gị edepụtara ọgwụ a n'ihi na ọ kpebiri na abamuru gị dị ukwuu karịa ihe egwu nke mmetụta. Ọtụtụ ndị na-eme ọgwụ a adịghị enwe mmetụta dị egwu.
Ọ bụ ezie na a na-eji ọgwụ a agwọ isi biliary cholangitis (PBC), ọ nwekwara ike ịkpata nrịanrịa nke ụfọdụ mgbaàmà imeju. Gwa dọkịta gị ozugbo ma ọ bụrụ na ị nwere mgbaàmà dịka ọhụụ ma ọ bụ na-akawanye njọ nke anụ ahụ, ọgbụgbọ / agbọ agbọ nke na-anaghị akwụsị, enweghị agụụ, afọ / afọ mgbu, ịcha anya / anụ ahụ, mamịrị gbara ọchịchị, ahụ ike / nkwonkwo ụkwụ. / ụkwụ / afọ, ma ọ bụ mgbanwe uche / ọnọdụ. Dọkịta gị nwere ike ịnye ọgwụ ndị ọzọ dị ka mmiri resin acid ma ọ bụ antihistamines, ma ọ bụ kwụsịtụ / dozie ọgwụ gị ruo nwa oge iji nyere aka jikwaa mmetụta ụfọdụ. Soro dọkịta gị kwurịta nsogbu na uru dị n'ị ofụ ọgwụ a.
Ọrịa dị oké njọ nke na-eme ọgwụ a abụghị obere. Otú ọ dị, nweta enyemaka enyemaka ahụike ma ọ bụrụ na ị hụrụ ihe mgbaàmà ọ bụla nke mmeghachi omume nhụsianya dị njọ, gụnyere: ọkụ ọkụ, itching / swelling (karịsịa nke ihu / ire / akpịrị), oké ugwoju, nsogbu na-eku ume.
Otu esi azụta Obeticholic Acid powder from AASraw